Fomba fampiasana fitaovana miendrika ExFAT amin'ny Linux | Avy amin'ny Linux
Fotoana vitsy lasa izay dia nanoratra taminay izy ireo momba ny tsy fahafahan'ny fampiasana fitaovana ExFAT amin'ny Linux, na dia tsy fahita firy aza ny famolavolana endrika ao anatin'ity endrika ity, ny distros rehetra dia tokony ho afaka mitantana azy ireo amin'ny toerana misy anao, raha toa ka tsy iray amin'ireo tsara vintana ny distro anao ary tsy afaka nampiasa ianao ny fitaovanao miaraka amin'ity fampianarana ity dia antenainay fa afaka izao ianao.
1 Inona no atao hoe ExFAT?
2 Ahoana ny fampiasana drive ExFAT amin'ny Linux?
Inona no atao hoe ExFAT?
ExFAT Izy io dia rafi-drakitra maivana, izay noforonina hampiasaina amin'ny flash drive satria endrika maivana kokoa noho ny NTFS izy io, raha ny tena izy, io endrika io dia mifanaraka amin'ny rafitra miasa rehetra ankehitriny, fa amin'ny distro sasany dia tsy miakatra ho azy izy io. ny fitaovana.
Ny iray amin'ireo maharatsy ny ExFAT dia ny tsy fananany fepetra fiarovana toa ny NTFS, fa raha mihoatra ny fetran'ny FAT32 malaza kosa izany, ny tena fampiasana ny ExFAT dia ny fanomanana ireo haino aman-jery multimedia izay haverina aorina amin'ny fitaovana toy ny fahitalavitra, console lalao. , telefaona, mpilalao ankoatry ny hafa.
ExFAT dia mamela ny rakitra misy habe sy partitions tsy misy fetrany, noho izany dia vonona amin'ny kapila lehibe izy io ary koa fitaovana ivelany misy capacities kely.
Ahoana ny fampiasana drive ExFAT amin'ny Linux?
Indraindray ny distro anao dia mahafantatra ilay fitaovana nefa manakana ny fidirana amin'ireo antontan-taratasy voatahiry ao aminy, na inona na inona ny olanao dia mitovy ihany ny vahaolana. Mila mametraka exFat fotsiny isika amin'ireto baiko manaraka ireto:
Aorian'izany dia afaka mampiasa ny fitaovantsika fotsiny isika. Amin'ny tranga sasany dia mitohy ny olana, noho izany dia tsy maintsy mamorona ny fampirimana multimedia miaraka amin'ity baiko manaraka ity isika:
Manaraka izany dia tsy maintsy apetintsika ao amin'ny lahatahiry mifanaraka amin'izany ity baiko ity:
Raha te hanala ilay fitaovana ianao dia manaova fotsiny ity baiko manaraka ity:
Amin'ireto dingana tsotra nefa mahery ireto dia afaka mampiasa fitaovana misy endrika ExFAT tsy misy olana isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fampiasana fitaovana misy endrika ExFAT ao amin'ny Linux
Pzyko dia hoy izy:
Tena ilaina tokoa ny lahatsoratra tena tsara, tohizo foana toy izao, ho feno fankasitrahana aho raha afaka manampy ahy amin'ny fisalasalana kely ianao, nametraka ny Ubuntu amin'ny solosaiko PC aho ary ilaina ny mametraka Windows, hoy izy ireo ny fizarazaran'ilay kapila sy ny fametrahana azy, saingy tsy haiko ny fomba hahazoana indray ny fidirana amin'ny fizarazaran'i Windows Misaotra
Valiny tamin'i Pzyko
ramses_17 dia hoy izy:
Vaovao farany ny grub
$ sudo fanavaozana-grub2
Mamaly an'i ramses_17
Na dia taona maro lasa izay aza dia nandeha avy tany grub ka grub2, ny $ sudo update-grub dia hitovy ary miasa ho an'ny grub2 ihany koa.
Etsy ankilany manontany tena aho fa tsy nanao an'izany nandritra ny taona maro aho, raha toa ka tsy ilaina ny fametrahana ity fikirana vaovao ity amin'ny $ sudo grub-install / dev / sda, efa misy ity dingana farany ity ve ny update-grub2? Satria tsy hitako ny baiko mametraka grub2-install.
Lahatsoratra mahafinaritra, misaotra betsaka anao nanao an'io asa io.
Izaho manokana dia mampiasa an'ity rafitra fisie ity foana. Fa marina fa amin'ny Linux dia manome olana vitsivitsy.
Valiny amin'i Broker
Manana Ubuntu 20.04 aho
Aorian'ny fanaovana izay rehetra tondroinao:
#sudo apt mametraka exfat-fuse exfat-utils
ERROR: tsy nahavita nanokatra '/ dev / sdb1': Tsy misy rakitra na lahatahiry toy izany.
Manana kapila mafy 2Tb tsy azoko ampiasaina izy satria any exfat no misy ny rafitr'izy ireo
Valio ny tetelx